Xaqiiqooyin cusub oo ku Saabsan Duulaankii guriga CC Shakuur oo La shaaciyey
By Caalamka On Oct 25, 2019
MUQDISHO, Soomaaliya – Dhowaan waxaa banaanka u soo baxday warbixin qeyb ahaan qarsoodi ah oo UN Monitoring Group ay bishii November 2018 u gudbisay Golaha Ammaanka Qaramadda Midoobay.
Warbixinta ayaa ku eedeyneysa Saadaq Cumar Maxamed [Saadaq John], oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir horeyna u soo noqday madaxa sirdoonka, in uu geystay dilal qarsoodi ah.
Mid kamid ah eedeymaha ku jira warbixinta waxaa kamid ah in uu hogaaminayey weerarkii ay ciidanka dowladda 18-kii December 2017 ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Cabdiraxmaan, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, ayaa falkaas ku waayay shan kamid ah ilaaladiisa kuwaas oo durba la aasey.
Jay Bahadur, xiriiriyaha Guddiga Khuburada Monitoring Group ee arrimaha Soomaaliya, oo ku saxiixan warbixinta, ayaa qormada ku sheegay in Saadaq John uu sidoo kale qaadey howgalo lagu fuliyey khaarijin daahsoon.
Biixi: Dowladda Farmaajo waxay u soo tababaraneysaa Maamulkeyga
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo loo diiday Ceelwaaq
Jeremey Schulman, qareenka Saadaq, ayaa eedeymaha ku jiray warbixinta ku sifeeyay mid aanan lahayn “sal iyo caddeymo taxadna aan laga sameyn” laguna “sumcad dilayo qof furan oo muhiim ka ah Soomaaliya”.
Jawaabta Schulman oo loo dusiyey warbaahinta ayaa su’aallo waxaa layska waydiinayaan cidda bixisay.
Mr Bahadur, oo Barnaamijka Bandhiga ee laanta Af Soomaaliga ee VOA-da, ayaa adkeystay in maadaama warbixinta qarsoodi tahay uu sharciga u diidayo in uu ka jawaabo su’aal kasta oo laga qabo eedeymaha ay soo bandhigeen.
– 25 daqiiqo –
Hoyga Cabdiraxmaan Cabdirashakuur Warsame oo sidoo kale ah xarunta xisbiga Wadajir ayaa la beegsaday xili habeen ah, waxaana howlgalka lagu qaadey uu qaatay muddo 25-daqiiqo ah oo lagu xiray siyaasiga laguna dilay ilaaladiisa.
Wasiir hore, Cabdiraxmaan, ayaa warqadda difaaca qareenka, wuxuu ku qeexay “mid aanan lahayn wax caddeymo ah” lana doonayo in lagu bariyeelo Saadaq John “oo habeenkaas uu isaga hogaaminayey howlgalka”.
“Saadaq hogaanka howlgalkaas habeenkaas isagaa qaabilsanaa, cidda ka sareysay, cidda ka dambeysay iyo cidda amarka soo siisay waa lawada og-yahay, aniga waxaan ku marqaati furayaa in uu isaga hogaaminayey”.
Schulman oo muujiyey in uu “beer nugaal u hayo dhibaatada raadka ku yeelatay Cabdiraxmaan” ayaa ku diiday eeda siyaasiga, wuxuuse carabka ku dhuftay in howlgalkii lagu weeraray guriga “laga maamulayey xafiiska NISA”.
– “Madaxweynahan u socdaa” –
Siyaasi Cabdiraxmaan oo ku adkeystay in Saadaq John uu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii lagu ekeeyay hoygiisa ayaa dib u celiyay xusuustiisa, isaga oo soo bandhigay wixii dhacay habeenkii duulaanka.
“Irida ayuu soo garaacay, ninka aniga ii ah waardiyaha gaarka ah ayaa ka furay wuxu yiri ‘Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan rabaa’ waliba erayga ah ‘madaxweynahan usocdaa’ ayuu isticmaalay,” ayuu raaciyey.
Sidda laga soo xigtay Cabdiraxmaan, ruuxa albaabka ka furay Saadaq John ayaa wuxuu la suuxay haraanti uu irida kusoo dhuftay. Shaqsiga wuxuu dhulka yaalay tan iyo dhamaadkii howlgalkas “boogta ku noqday Villa Soomaaliya”.
“Saadaq waan maqlay, waan arkay meesha uu taagnaa ayaan ogahay, dharka uu watay nooca ay yihiin ayaan ogahay, kaligey ma ahan todoba qof iyo dad kale oo ayaa guriga joogtay, wax qarsoon maahan isagaa mas’uul ka ahaa”.
– Marqaati –
Dadka uu marqaati ahaan u soo qaatay Jeremey Schulman ee kasoo muuqday warbixintiisa difaacitaanka Saadaq waxaa ku jira Cabdullaahi Sanbaloolshe, taliyihii hore ee sirdoonka balse aan xiliga weerarka xafiiska aan joogin.
Sanbaloolshe iyo Schulman ayaa kulmay. Waydiimaha kooban ee uu Abukaataha hordhigay Madaxii hore ee NISA waxaa kamid ahaa; goorta ay isbarteen Saadaq, dabeecadihiisa iyo qaabka shaqadiisa.
“Waxaan marqaatiga ku kacay waxay ahaayeen intii aniga iga quseeyay, intii aan wada shaqeynaynay aniga iyo Saadaq. Wixii aniga iga dambeeyay oo dhibaato ah uu geystay ama howlgalada qaarkii wax aan ka sheegi karey ma jirin”.
– Talaabooyin kale –
Xeer-ilaalinta Soomaaliya ayaa ku guuldareystay in ay qabato dacwad ka dhan ah Saadaq John oo ku saabsan kiiskan, waana sababta keentay in gal-dacwadeedka caalamka loo gudbiyo, sida uu tibaaxay Cabdiraxmaan.
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo xusay in ay qorsheynayaan in ay dacwado kale ka furaan dibadda ayaa cod dheer wuxuu xukuumadda ku tartarsiiyey in “hadii Saadaq John uusan qaadin howlgalka ay sheegto cidda fulisay iyo amarka”.
“Waligey goobjoog kama noqon weerar noocaas oo kale oo dhacaya, dabiiciyana howlgal sidaas oo kale ahna ma ahan howlgal ay askartu go’aamin karto waa howlgal meesha ugu sareysa kasoo go’aya,” ayuu ku daray Sanbaloolshe.
Abukaate Schulman ayaa nan wali wax jawaab ah ka helin kooxda Jay Bahadur tan iyo markii ay gudbiyeen jawaabtooda difaacitaanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa nan aqoonsaneyn Guddiga Khuburada Monitoring Group ee arrimaha Soomaaliya ee uu ka tirsan yahay Jay Bahadur.
Saadaq John oo aad ugu dhow madaxda taladda haysa ee Soomaaliya isla markaana dhowr jeer la dalacsiiyey ayaa sanadkan kamid ahaa wafdigii madaxweyne Farmaajo ee ka qeybgalay shirka guud ee UN-ka.